Munamato kuSan Marcos de León. ? kuTame, Kushanda uye Rudo.
Namata kuna San Marcos de León. Minyengetero yose ine simba, asi munamato wekusaina mucherechedzo weLeon kugadzirira, nekuda kwerudo, basa uye kutaurwa kwakakosha sezvo Musita Mako aive padyo na Jesu paakange ari pano pasi.
Evhangeri yeSan Marcos ndiyo inonyanya kukosha sezvo iine vhezheni yepfungwa dzemwana, sezvaingoitwa naMarcos panguva iyoyo, izvo zvinoita kuti ive shanduro isina mhaka uye izere nezvokwadi inokanganisa munhu wese anofamba kuburikidza nezvavari. mavara.
Nhasi, San Marcos chave chinobudirira kubvunza Mwari kune zvese zvikumbiro zvine simba, zvisinei nekuti chishamiso chinotarisirwa chingave chakaoma sei.
Saint Mako, shamwari yaJesu, vanova shamwari dzevaya vese vanochengeta chinodiwa mumoyo yavo uye avo vanoda chimwe chinhu chakaitwa munyasha yavo kubva kudenga.
1 Ko minamato kuChitadzo Mako chaLeon inoshanda here?
1.1 Namata kuna Saint Mark waLeon kuti ashore munhu
1.2 San Marcos de León munamato worudo rusinga bviri
1.3 Munamato weSanta Mako waLeon webasa
1.4 Munamato unouya unouya | rudo
Ko minamato kuChitadzo Mako chaLeon inoshanda here?
San Marcos de León aigara ari pedyo naJesu Kristu, nekudaro achikumbira iye kuti abudirire, nekuti anotinyengeterera pamberi peshamwari yake.
Minamato iwo anofanirwa kuitwa kubva pakadzika kwemweya y nokutendeka kose kunogoneka, rangarira kuti tiri kukumbira kuti chishamiso kana kuti mamiriro agadziriswe, ndosaka uchifanira kubvunza zvakajeka kuti chii chinodiwa.
Nemunamato kuna Saint Mark waLeon akafanana. Iko kunodiwa kutenda.
Saint Maros anoziva kuti chii kuona shamwari yake ichifa, iye anoziva kuti chii kuparidza izwi raMwari kana achitambudzwa, akatambudzika neshungu uye kusuwa, kutya kusazivikanwa uye nematambudziko ese anogona kutambudzika.
Ichi chikonzero Unoita rini chikumbiro haatore nguva kupindura, nekuti iye anoziva izvo zvinogona kutambudzika pano pasi uye ikozvino mubatsiri wedu kudenga.
Simba rake infinito, zvishamiso zvaro zvisingaverengeki. Kune zviuru zvevanhu vanogona kupupura nezve simba rayo, ndosaka iyo minamato San Marcos de León anoshanda.
Namata kuna Saint Mark waLeon kuti ashore munhu
San Marcos de León iwe wakatakura shoko raKristu nyika inzwai munyengetero wangu.
Dai simba rako uye kutsunga kuzadzikise kururamisira uye dai vavengi vangu vakawa vakundwa pamberi peSan Marcos yakanaka, ne simba weShumba nesimba rayo rekutonga zvinoita kuti vanhu vane chinangwa chekundikanganisa vapfugame pamberi paMwari vachinje mafungiro avo.
Ndirevererei, imi makasiya hupenyu hwenyu kuti muite kuti izwi reWekumusoro-soro rizivikanwe uye muteerere chikumbiro changu ...
(Isu tinoita chikumbiro)
Ini handidi zvakaipa zvemumwe munhu naye, asi kuti ndiverenge avo vakandiitira nekundikuvadza kuti vadzokere kwandiri nenzira nyoro uye yakanaka.
Dai rudo rwakakunda zvakaipa uye hupenyu hwangu huve nzvimbo yerunyararo.Zvese izvi ini ndinokumbira muzita raJesu Kristu Tenzi wedu uye ndinokumbira kuti munditeererewo munamato wangu wepamoyo.
Minamato inogona kuitwa kune chero chikonzero uye hapana ane udyire uye haana kunyanyisa kana akaderera pane mumwe.
Vanhu vese vanopfuudza zvatinoda uye tinoda kureverera pamberi pamatenga kuti tigamuchire zvatinoda.
El bvunza kuti tame Munhu akadaro, nguva zhinji, chinhu chehupenyu kana kufa.
Inogona kushandiswa munzira dzakawanda, senge kubasa, imba, nehama o shamwari y Amor.
Nemunamato uyu usatsvaga kumanikidza kana kuendesa zvido zvevamwe vanhu asi kuti ugone kunyengerera zvishoma kuti uwane chinangwa icho chichava chinogutsa kune mapato ese ari kuita.
San Marcos de León munamato worudo rusinga bviri
Vakakomborerwa Mushe Mako waLeon, imi munoita kuti zvese zvisingagoneke zvibve, iye anofambisa shato neshumba. Gadzira (zita remunhu) cherekedza manzwiro angu, mudiwa wangu, chibayiro changu.
Ndinokuteterera iwe kuti moyo wako usingaongi utapurirwe nemirazvo yerudo. Paunomuka kubva kuhupombwe hwako, ini ndinoda kuti iwe ufunge nezvangu.
Ah, San Marcos de León, iwe iwe wakasunungura uye wakakwanisa kudzvanya chikara chine simba kwazvo, saka ndinokukumbira kuti utore kupwanya kwangu kunonditeerera, huya, uuye, kusave neanomumisa. nzira dzerudo dzinopindirana neyako, kuti unondida nesimba rimwe chete randinoda uye ndinokuda.
Kune pfungwa dziri mu (zita remunhu) ini ndinouya kwauri, Mutsvene Mako, kuti muzviroto zvako uye zviroto uve muzita raMwari uye kubudikidza neni, rudo rwako ngarutungamire rungene kumoyo wangu, dai ndirini mupfungwa dzako .
Ndibatsire kuporesa moyo uno unotambura nekusakendenga kwako uye ita kuti kutambudzika kwangu kose kushanduke kuve rudo rwakadzoserwa.
Izvo zvinodikanwa kuti nguva dzose unamate munamato San Marcos de León yerudo.
Rudo ndechimwe chezvikonzero chinoita kuti vanhu vakwane kuve mukutaurirana nedenga nguva dzese.
Ehe usadzorerwe chii kumwe kunetseka kuri kupfuura nevaviri ava minamato yerudo San Marcos de León vane simba.
Mune yerudzi urwu rwezvikumbiro munhu anofanira kutaura aine kutendeka kwakazara. Rangarira kuti tiri kutaura nemunhu akatambura pano pasi pano matambudziko ese uye ndosaka achizotinzwisisa zvakakwana.
Kana uchiita munamato nekusahadzika masimba akashata akasunungurwa anoita kuti munamato usasimuke, ndosaka uchifanira kukumbirwa nekutenda, uine chokwadi chekuti musiki Mwari wezvose zvinhu achada kutibatsira, izvo zvisiri pasina nguva yatiri kuisa mari mukunyengetera.
Kunamata usine kutenda kwakafanana nekusaita chinhu uye kana iwe uchinge wafirwa nechikumbiro chine chekuita nerudo, kutenda ndicho chakavanzika icho chinobatsira kuti zvese zvigadziriswe nekukurumidza.
Munamato weSanta Mako waLeon webasa
Ndiri pano, O San Marcos de León, kukunamatai nekuzvininipisa!
Kuti uswedere kune izvo zvawakadudzira; Kurumbidza tsitsi dzako dzisingaperi.
Semunhu akatendeka akazvipira, ndakagara ndichibatira nenzira kwayo zvakanaka zvigadziro zvaMwari, uye mweya wangu wakasimbiswa nemagwaro matsvene.
Naizvozvo, muevhangeri anodikanwa, ndinokumbira iwe nhasi kuti undipe iyo nyasha yaunotoziva kare ...
(Taura favour zvine chekuita nebasa)
Iwe unoziva kuti naye ndinongotsvaga zvakanakira ini newangu uye ndinongoshuvira kuswedera padyo naIshe. Ndinoziva kuti ndichanzwikwa nekuti ...
Iwe ungori nengoni.
Bvunza San Marcos de León kune chimwe chinhu chine chekuita nehupenyu hwedu hwekushanda Icho chinangwa chekukosha chaiko.
Kubasa kwedu ndiko kunoitwa imba yedu yechipiri sezvo paine maawa mazhinji atinopedza ipapo, ndosaka nguva zhinji paine mamiriro ezvinhu atisingakwanise kuita zvinopfuura kuwedzera munamato nekutenda kuti igadziriswe.
Munamato uyu unogona kutungamira kune basa ratakambomirira kwenguva yakati kana kugadzirisa chero zvinovhiringidza izvo zviri kutadzisa basa redu kuyerera nemazvo, chero chikumbiro chebasa chaungave nacho chinogona kukumbirwa kubva kuSan Marcos uye iye achakubatsira.
Munamato unouya unouya | rudo
Muzita raMwari ini ndinokumbira iwe, mweya wekutonga Mweya weStyprian, uye nekupererwa nezano Don Juan yemigwagwa, mweya waJohani miner Wemigwagwa, nzira, nenzvimbo, mweya wemhepo ina mhepo yeSt. Mark ye Shumba.
Ini ndinokuita izvi munamato wekutsvenesa mucherechedzo weshumba unouya Ini ndinokushongedza kuti undibatsire kugona pfungwa shanu.
Pfungwa, kutongwa, uye kuda kwe (zita remunhu) Kuti handigoni kudya kana kurara, handigoni kumwa kana kufamba.
Dai mifungo yake ichingoiswa pandiri pasi petsoka dzangu iye anomira pakamira kuti andiise apfidze uye azvinze Anondibata neruremekedzo rwese rwatinofanirwa.
Na 2 ndinokuona, ndine 3 ndinokusunga, iro ropa randinonwa uye moyo ndinokupa maziso angu asingaone iwe uye kuda kwangu ndekwako Saka ngazvive saizvozvo.
Tinoda kupedzisa chinyorwa chedu nemunamato kuSan Marcos de León izvo huya uwane rudo.
Munamato wakasimba uye unozivikanwa.
Iyo inonamatirwa kuSt.Mark uye San cipriano.